Sei kunyora chinyorwa kuchikoro nezve kusavapo kwemwana nekuda kwehurwere? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Sei kunyora chinyorwa kuchikoro nezve kusavapo kwemwana nekuda kwehurwere?
Nyora tsamba mune yemahara fomu:
quot; Mudiwa Marya Ivanovna!
Mwanakomana wangu / mwanasikana wangu akange asipo / asipo pachikoro kubva ku1.11.13 kuenda ku7.11.13 nekuda kwefuru / maronda pahuro / chimwe chinhu. Rubatsiro harukwanise kuwanikwa nekuda kwechikonzero chikuru chechikamu chekiriniki. Ndokumbirawo ubate nekunzwisisa uye utangezve zvidzidzo kumwana wangu. Zvese zvemba zvinopera.
Pachokwadi, amai vaSasha / Masha Marina Andreevna
Kunze kwekunge, zvechokwadi, mudzidzisi akajairwa. Kana zvisina kujairika, bvisa mutsara ipapo.
Zvakanaka kwauri kuti uuye kuchipatara, utsanangure mamiriro ezvinhu uye vanachiremba vanokupa zvirokwazvo chitupa zvinoenderana nekuti mwana wako haana kuenda kuchikoro. Kuti prose yako iwane simba, iwe unogona, kune kuvimbika, kuunza bhokisi remachokoreti kana, mune zvakanyanya, bhata rechokoreti.
Ini ndakanyora tsamba pamusoro pezvinotevera zvemukati chikoro:
Dear_______ (zita rekutanga, zita repakati, zita rekirasi).
Mwanakomana wangu (mwanasikana) anga asipo mumakirasi kuchikoro kubva munaFebruary 10 kusvika Kukadzi 15 Kukadzi 2013 nekuda kwehurwere (chirwere chechirwere chekufema, furu, nezvimwewo)
17.02.2013 g. (Zita remubereki)
Kazhinji chinyorwa chakadai chakagamuchirwa kana ini ndikayambira mudzidzisi parunhare pachine nguva kuti mwana airwara uye aisakwanisa kuenda kuchikoro.
Isu taiwanzodaidza mudzidzisi wekirasi uye nekutsanangura chikonzero chekusavapo kwemwana. Uye pasina zvakasiya pasina. Chiremba anosungirwa kugamuchira varwere vese, kunyanya sezvo iwe wakamira mumutsara weawa 3.
Anodiwa akadai uye akadaro (zita rakazara). Ini ndinokumbira usunungure akadaro-uye-akadai (FI) kubva kukirasi yedzidzo yemuviri, mudzidzi weaka-uye-mukirasi akadaro maererano (nekuda kwe) chirwere chine huwandu-ne-uye-uye-uye-huwandu, kupenda.
Zviri nani kufonera uye kunyevera mudzidzi wekirasi kuti mwana arwara. Uye nyora tsamba muhara fomu .. Asi kana mwana asipo kwemazuva akati wandei (hapana kurwara kwemudumbu, hapana zino rakarapwa, asi ARI, semuenzaniso) saka zviri nani kuve nesitifiketi. Kana iwe usingakwanise kuita musangano, saka iwe unofanirwa kufonera chiremba kumba.
Tsamba yekuenda kuchikoro nezve kusavapo kwemwana mukirasi inowanzo kunyorwa mumahara fomu. Asi zvakadaro, inofanira kuvezwa kumusoro, uye isati yakanyorwa pahafu yepepa.
Unogona kunyora nenzira iyi: quot; Mwanakomana wangu (zita rekupedzisira, zita rekutanga) akange asipo kuchikoro panguva iyo kubva (zuva) kusvika (zuva) zvine chekuita ne ... (ratidza chikonzero) quot ;. Zuva, siginecha.
Ndiri kunyora tsamba ku chikoro seichi: Mudiwa, zita, Patronymic yemudzidzisi! Mwanasikana wangu Surname Zita remwana raive risipo (rakadaro uye rakadaro) kuchikoro nekuda kwemalaise. Zvese zvemba zvakapera. Zuva, rakachena, siginecha.
Mibvunzo kazhinji haimuki uye gwaro kuchikoro haridiwi.
Mudiwa, akadai-uye-akadai, mwana wangu, Wacho uye akadaro, haana kuenda kuchikoro na ........ ne ... ... nekuda kwehurwere.
Naizvozvo-nhingi nhingi (amai) Signature.
Ndinofunga izvi zvichave zvakakwana. Kunyangwe zvinoenderana nechikoro chipi.
Asi mune World Cup dambudziko. Iwe unongoda kunyora tsamba umo iwe unongotsanangudza chikonzero chemwana asiri kuenda kuchikoro. Izvi zvinogona kuitwa mune chero chimiro, semuenzaniso, muchimiro chechirevo kana chinyorwa chinotsanangudza. Chinhu chikuru ndechekuti kukosha kwacho kwakajeka.
Posted in mhuri uye kumba
Mibvunzo ye62 mu database yakagadzirwa mu 0,300 masekondi.